Jaaliyada DDSI Ee Australia Oo $10,000 Ugu Deeqday Dadka Ka Barakacay Deegaanka Axmaarada. - Cakaara News
Jaaliyada DDSI Ee Australia Oo $10,000 Ugu Deeqday Dadka Ka Barakacay Deegaanka Axmaarada.
Melbourne,(cakaaranews), Isniin, 19ka, September, 2016. Jaaliyada DDSI ee wadanka Australia ayaa qabtay kulan uu soo diyaariyay Ururka horumarinta somalida itoobiya ee wadanka Australia kaasi oo ka dhacay magaalada Melbourne ee wadanka Australia.
Kulankaasi oo ay ujeedadiisu ahayd sidii ay jaaliyada DDSI ee Australia u gaadhsiin lahayd deeq dadka ka soo barakacay deegaanka Axmaarada ayaa waxaa ka soo qaybgalay jaaliyada DDSI iyo jaaliyada deegaanka Tigreega.
Hogaaminta jaaliyada DDSI ee Australia ayaa si qoto dheer uga warbixisay dhibaatooyinka arxan darnada ah ee loogaystay shacabka aan waxba galabsan ee ka soo jeeda deegaanka Tigreega. Waxayna sheegeen in ay aad uga xun yihiin kana Tiiraanyoonayaa dhibaatadaasi loogaystay shacabka. Hogaaminta jaaliyada DDSI ayaa sheegtay in ay dhibaatadaasi ka danbeeyeen shaqsiyaad iyo kooxo doonaya in ay meesha ka saaraan nidaamka federalismka kuna celiyaan qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya nidaamkii kalidii taliskii dhiigyo cabka ahaa. Dhanka kale waxay jaaliyada DDSI taageeru u muujisay go,aanki geesi nimada lahaa oo ay qadatay xukumada DDSI ee uu hogamiyo madaxwayne Abdi mohamud omar ee ay deeqa 10 milyan ee bir ah ugu deeqeen dadkaasi.
Jaaliyada DDSI ee wadanka Australia ayaa kulankaasi ku shaaciyay in ay jaaliyadu ugu deeqday dadkaasi ka soo jeeda deegaanka tigreega ee ka soo barakacay deegaanka axmaarada deeq lacageed oo dhan $10,000 oo dollars (tobon kun oo doolar)
Dhankooda hogaaminta jaaliyada deegaanka tigreega ee wadanka Australia ayaa aad ula dhacay ugu mahad celiyay deeqda jaaliyada DDSI ku deeqday dadkaasi. Waxayna sheegeen in dawlada deegaanka somalida, shacabka deegaanka somalida iyo qurba joogta DDSI muujiyeen taariikh lama ilaawaan ah. waxayna noo cadaynaysaa ayay yidhaahdeen deeqdani sida ay DDSI uga damqanayaan dhibaatada soo gaadhay shacabka tigreega ee ka soo barakacay deegaanka Axmaarada.